Horohorontany any Haiti tamin'ny 26 Janoary 2010 - Wikipedia
Horohorontany any Haiti tamin'ny 26 Janoary 2010
(tonga teto avy amin'ny Vokatry ny horohorontany any Haiti tamin'ny 2010)
Ny horohorontany tany Haiti tamin'ity 2010 ity dia horohorontany avy amin'ny hodi-tany mirefy 7,0 - 7,3 amin'ny maridrefy Richter nitranga tamin'ny 12 Janoary 2010 tamin'ny 4 ora hariva 53 minitra, orana an-toerana. Ny anivon'ilay horohorontany dia 25 km any Atsimon'i Port-au-Prince, renivohitr'i Haiti. Misy horohorontany madinidinika mirefy anelanelan'ny 5,0 sy 5,5 tamin'ny ora nanaraka.
Ny horohorontany faharoa nitranga, mirefy 6,1 nitranga tamin'ny 20 Janoary 2010 tamin'ny 6 ora maraina sy 3 minitra, ora an-toerana. Ny anivon'ilay horohorontany dia 59 km any andrefan'i Port-au-Prince, ary latsaky ny 10 km ny halavirany amin'ny velarana.
Betsaka ny olona maty, naratra sy ny olona tra-boina tamin'ny horohorontany voalohany. Tamin'ny 15 Janoary hariva, ny misitra Haisianina Paul Antoine Bien-Aimé dia nilaza : « Hisy iray na roa hetsy any ho any no maty, na dia tsy ho fantatsika mihintsy ny isa marina », kanefa ny Jeneraly Ken Keen, mpitondra ny tafika amerikana eo an-toerana, dia milaza fa misy any amin'ny roa hetsy any ho any ny maty. Ny governemanta haisianina dia nilaza fa namolo olona 1 hetsy sy dimy alina ny horohorontany, isan'ny faty nesorina tamin'ny poti-trano. Tamin'ny 27 Janoary, nisonitra ho 1 hetsy sy fito alina io isa io. Ny Fikambanan'ny Jeôlojia amerikana dia nilaza tamin'io andro io fa setry roa ambin'ny dimampolo no manana refy maherin'ny 4,5. Hatry ny 23 Janoary, misy olona 132 no avotan'ny fanampiana iraisam-pirenena tamin'ny poti-trano.
Betsaka ny trano potika ohatra ny Lapam-pirenena, ny Katedraly Notre-Dame de Port-au-Prince
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Horohorontany_any_Haiti_tamin%27ny_26_Janoary_2010&oldid=691281"
Dernière modification le 4 Janoary 2014, à 21:55
Voaova farany tamin'ny 4 Janoary 2014 amin'ny 21:55 ity pejy ity.